Kurara maitiro paApple Watch kunovhenekesa kupenya kune kwakanyanya kuti ikumutse | Ndinobva mac
Kurara maitiro paApple Watch kunovhenekera kupenya kune kwakanyanya kumuka
Imwe yezvinhu zvitsva zvewatchOS ndiko kuuya kwehope mode uye kana iwe uri mumwe wevaya vanosiya wachi ichiraja husiku neiyi sarudzo inoshanda, iwe uchave waona kuti iyo skrini inopenya inoenda munzira yese kumusoro kukumutsa iwe.
Chero zvazvingaitika izvi hazvigone kuchinjwa uye Apple yakazvishandisa mune yazvino vhezheni yesoftware. A) Hongu panotanga kurira alarm yekutanga pa iPhone yako kana Apple Watch (Chero bedzi ivo vachigovana maaramu sarudzo uye iwe usinazvo paruoko rwako) mune iyi modhi uchaona kuti iyo skrini inowedzera kupenya kusvika pakakwirira.
Maitiro ekuisa Kurara paApple Watch
Sarudzo idzi dzinoverengeka uye zvinoenderana nekuti iwe uri mumwe wevaya vasingabvisi wachi yekurara kana anoisiya ichiroja patafura. Chero zvaungaite sarudzo, wachi ine akati wandei sarudzo dzekugadzirisa muSleep mode uye iwe unogona kuzviita nenzira inotevera:
Vhura iyo yekurara app paApple Watch
Tevedza rairo rekiriniki uye isa alarm
Kune rimwe divi, zvinokwanisika kuvhura iyo Hutano app yeiyo iPhone, inova nzvimbo iyo iyi yekugadzirisa sarudzo iko ikozvino (isati yave maAlarms) uye tinya Ongorora> Kurara> Kutanga (mukugadzirisa Kurara basa). Pakati pesarudzo idzi hatiwane chero idzo dzinotibvumidza kugadzirisa kusimba kwekupenya muaramu uye zvingave zvakanaka kukwanisa kumisa iyi sarudzo kana kwete. Ngatimboonai kana inotevera vhezheni Apple inoitora ichifunga uye inotibvumidza kuita iyi gadziriso, nekuti ikozvino kana iwe ukaisiya ichichaja neiyi mode yakamutswa kuti umuke neine alarm alarm iwe uchafanirwa Batisisa nekupenya kwakazara pawatch panguva iyoyo kusvikira wamisa alarm.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kurara maitiro paApple Watch kunovhenekera kupenya kune kwakanyanya kumuka
Maitiro ekugadzirisa iyo Center Center mu macOS Big Sur
Amazon iri pamberi peApple uye yave kuda kutenga Zvinoshamisa